Cali Shaamey oo diiday xilka qaadistii uu ku sameeyay Wasiirka Boostada
Monday June 10, 2019 - 08:58:34 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Cali Ibraahim oo ku magac dheer Cali Shaamey, ayaa sharci darro ku tilmaamay talaabada Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya Eng Cabdi Canshuur Xasan uu ugu saaray Guddiga Isgaarsiinta Qaranka ee ka kooban 9-ka Xubnood.
Qoraal uu soo saaray Cali Shaameey waxa uu ku sheegay in uu la tashiyo dhinaca sharciga uu sameeyay, taasoo uu ku soo ogaaday in Wasiir Canshur aanu awood sharciya u leheyn in uu xubin kamid ah Guddiga saaro.
Cali Shaameey waxa uu Guddiga ka ahaa Gudoomiyaha Guddi Hoosaadka Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ee dhinaca Maaliyada, waxaana uu sheegay in uu sii wadanayo howlihiisa shaqada, inta uu kasoo baxayo go’aan maxkamadeed oo cadeynaya in guddiga si sharci ah looga saaray.
Dhanka kale waxa uu tilmaamay in uu arrintaan u bandhigay xubnaha guddiga ee uu sagaalka ruux ku yahay iyo Guddiga Isgaarsiinta Qaranka Baarlamaanka Federalka Soomaaliya u qaabilsan.
Rajo wanaagsan ayuu ka muujiyay in ay fara geliyaan kiiskaan Cabashada ah ee uu u gudbiyay guddiyadaan, sida uu ku yiri qoraalkiisa Cali Shaameey.
Waxyaabaha uu sabab saday in Cali Shaameey looga saaro xubinnimadii Guddiga Isgaarsiinta Qaranka ayaa ah in uu hareer maray sharciga uu ku dhisan yahay Guddiga, isla markana xubnin uu ka noqday Xisbi Siyaasadeed, isaga oo warbaahinta kasoo muuqday.